Torohevitra 5 momba ny fiatrehana ny haino aman-jery ho loharanom-pahalalana | Martech Zone
Torohevitra 5 momba ny fiatrehana ny haino aman-jery ho loharanom-pahaizana manokana
Zoma, Aogositra 21, 2020 Zoma, Aogositra 21, 2020 Ron Gold
Ny mpanao gazety amin'ny fahitalavitra sy pirinty dia manadihady ny manam-pahaizana amin'ny lohahevitra isan-karazany, manomboka amin'ny famolavolana birao an-trano ka hatramin'ny fomba tsara indrindra hitehirizana amin'ny fisotroan-dronono. Amin'ny maha-manam-pahaizana anao amin'ny sehatra misy anao dia mety antsoina ianao handray anjara amin'ny sehatra fampitana na lahatsoratra fanontana, izay mety ho fomba tsara hananganana ny marikao ary hizara hafatra tsara momba ny orinasanao. Ireto misy torohevitra dimy hiantohana ny traikefa tsara sy mahomby amin'ny haino aman-jery.
Rehefa miantso ny media, valio
Raha manana fotoana hanaovana fanadihadiana ianao amin'ny fahitalavitra na amin'ny pirinty, alatsaho izay ataonao. Amin'ny maha mpanatanteraka anao, iray amin'ireo andraikitrao manandanja indrindra ny maka antoka fa mahazo gazety an-gazety ny orinasanao. Ireo mpikambana amin'ny haino aman-jery dia afaka miantso mora foana ny iray amin'ireo mpifaninana aminao, ka rehefa misafidy ny hiantso anao izy ireo, dia araraoty ny fahafaha-mivoaka ny anaran'ny orinasanao sy ny hafatrao.
Valio ara-potoana ary ampahafantaro ny tenanao. Raha miara-miasa sy mora idirana ianao, dia mety ho fiandohan'ny fifandraisana maharitra sy mahasoa izany. Omeo ilay mpanao gazety ny nomeraon-telefaoninao ary lazao azy fa afaka mifandray aminao izy na oviana na oviana.
Omano izay tianao holazaina sy ny fomba hitenenanao azy
Manaova drafitra ankapobeny momba ny zavatra tianao ho tratrarina amin'ny resadresaka haino aman-jery rehetra. Manana ny fandaharam-potoanany manokana ilay mpanao gazety: Te hanome lahatsoratra mahaliana sy mampahalala ny mpihaino azy izy. Fa manana fandaharam-potoana ihany koa ianao: mampita hafatra tsara momba ny orinasanao. Te hamaly ny fanontanian'ilay mpitati-baovao ianao, saingy mahay mamorona.
Lazao fa mpanao gazety iray dia manao ampaham-pahitalavitra momba ny fahasalamana alika, miaraka amin'ny fambara mahasoa momba ny fomba ahafahan'ny olona manome antoka fa salama ny alikany. Mety hanao dinidinika amin'ny mpiompy alika izy raha mila torohevitra. Ny mpiompy dia afaka mizara ny fahaizany amin'ny fihazonana ny alika ho salama, ary mampita ihany koa fa mpiompy mahomby izy nandritra ny 25 taona ary nametraka fitiavana sy ezaka be dia be hamokarana alika kely mahasalama sy falifaly.
Fantaro izay fantatrao, ary izay tsy fantatrao
Amin'ny maha-CEO an'ny orinasa anao dia tokony hanao ny ankamaroan'ny tafa sy dinika amin'ny haino aman-jery ianao. Fantatrao ny sary lehibe ananan'ny orinasanao tsara noho ny olon-drehetra, ary ianao no endrik'ilay fikambanana. Saingy indraindray misy olona ao amin'ny fikambananao manana fahalalana manokana momba ny lohahevitra iray manokana. Zava-dehibe ny mahatadidy fa na dia mety manam-pahaizana amin'ny zavatra maro aza ianao dia tsy manam-pahaizana amin'ny zavatra rehetra.
Lazao fa mivarotra famenon-tsakafo sy vitamina ny orinasanao. Mety ho fantatrao hoe iza amin'ireo vokatrao no be mpankafy indrindra sy mpivarotra lehibe indrindra, saingy mety tsy fantatrao ny siansa marina ao ambadiky ny vokatra rehetra. Ka raha ny resadresaka dia mikasika ny fomba fiasan'ny famenon-tsakafo manokana, dia mety ho tsara kokoa ny mipaipaika ilay manam-pahaizana siantifika miasa amin'io tsipika vokatra io hanaovana ilay dinidinika. Fantaro ny olona samihafa izay manana fahaizana isan-karazany ao amin'ny fikambanana misy anao, ary omano mialoha izy ireo hiresaka amin'ny haino aman-jery.
Amin'ny fanamarihana mifandraika amin'izany, raha misy mpanao gazety manontany anao fanontaniana izay tsy fantatrao ny valiny, dia mety hieritreritra ianao fa izany no tena mahamenatra. Aza matahotra anefa: Tsy misy maharatsy ny milaza amin'ny mpanao gazety hoe:
Fanontaniana tsara izany, ary te-hanao fikarohana aho mba hahazoanao valiny tsara. Azoko atao ve ny miverina any aminao anio?
Ary aza maminavina valiny. Ary rehefa miverina amin'ny mpanao gazety ianao dia aza hadino ny mametraka ny valiny amin'ny teninao manokana. Aza, ohatra, manapaka sy mametaka fehezanteny avy amin'ny lahatsoratra an-gazety na tranokala ary alefaso any amin'ny mpanao gazety izany. Ny fanontaniana apetraka dia tokony hovaliana amin'ny fahalalanao manokana - na dia mila manao fikarohana ianao hahazoana izany fahalalana izany.
Hajao ny mpanao gazety
Manaja am-panajana hatrany ny mpanao gazety. Ekeo ny anaran'ilay mpitati-baovao, na amin'ny fahitalavitra, an-tarobia na amin'ny Internet.
Mahaiza manaja olona sy miabo. Lazao ny zavatra toy ny hoe "fanontaniana tsara izany" ary "Misaotra anao nanisy ahy."
Na dia heverinao ho mampihomehy aza ny fanontaniana iray dia aza atao ho adala ilay mpanao gazety. Aza miteny hoe: "Fa maninona no nanontanianao ahy toy izany?" Tsy fantatrao hoe ahoana no hahafahan'ny mpanao gazety mandray ny valinteninao ary handetika ny vaovao ho tantara.
Aza mifanohitra amin'ny mpanao gazety, indrindra rehefa eny amin'ny rivotra ianao. Ataovy ao an-tsaina fa raha ratsy sy mahasosotra ianao dia ho tonga amin'ny fomba ratsy ny tantara.
Ary raha miresaka amin'ny mpanao gazety ianao dia hitady any an-toeran-kafa izy amin'ny manaraka raha mila manam-pahaizana amin'ny sehatra misy anao izy.
Akanjo ny ampahany
Raha hadihadiana amin'ny fakantsary ianao dia apetraho ny fisehony. Tompokolahy, raha manao palitao ianao, kitiho ny palitao; toa matihanina kokoa izany. Ho solon'ny akanjo iray, ny lobaka golf misy ny sary famantarana ny orinasanao dia safidy mety indrindra. Mitsikia rehefa miresaka fa aza mikorapaka.
Mazava ho azy, resadresaka maro ankehitriny no atao amin'ny Zoom na teknolojia mitovy amin'izany. Aza hadino ny mitafy akanjo matihanina (farafaharatsiny hatramin'ny valahana ka hatrany ambony), ary tandremo ny jiro sy ny mombamomba anao. Raha tokony ho korontana tsy voalamina ianao, ny tontolon'ny mahafinaritra sy milamina - angamba miaraka amin'ny sary famantarana ny orinasanao misongadina - dia hanampy anao hampiseho anao sy ny orinasanao amin'ny hazavana tsara kokoa.
Raha manana fanontaniana momba ny fifandraisana amin'ny haino aman-jery ianao, dia ampahafantaro anay. Amin'ny maha-orinasam-barotra amin'ny serivisy sy fifandraisana amin'ny besinimaro, Asa Marketing manome fiofanana amin'ny haino aman-jery miaraka amin'ny serivisy maro hafa.
Tags: loharanom-pahaizanatafatafa amin'ny mediaresadresaka an-tseraserampanao gazetytafatafa momba ny fifandraisana amin'ny daholobeZoom
Ron Gold dia filoham-pirenena sady CEO an'ny Marketing Works, orinasam-pifandraisana amin'ny serivisy sy serivisy miasa any East Setauket, NY. Izy koa no mpanorina sy mpiara-miasa amin'ny fandaharana onjam-peo The Nonprofit Voice ao amin'ny 103.9 FM LI News Radio.
MQLs Passé - MQM ve ianao?